Ọdụ ụgbọ elu Moscow Sheremetyevo Na-emepụta Ngwọta Ọhụrụ maka Njikwa Pavụl Airfield
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airport » Ọdụ ụgbọ elu Moscow Sheremetyevo Na-emepụta Ngwọta Ọhụrụ maka Njikwa Pavụl Airfield
Airlines • Airport • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • News • Ịrụ ọrụ • Akụkọ na -agbasa Russia • Technology • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
E mepụtara Sistemụ Njikwa Mmebi Mmekọahụ na -esochi nyocha nke ọma na nnwale nke usoro injinịa dị iche iche.
Usoro ọhụrụ iji nyochaa ọnọdụ pavement ikuku.
Usoro ọhụrụ ga-enyere ọdụ ụgbọ elu aka ịrụzi ihe n'oge na ịhazi nhazi ogologo oge.
Usoro a gụnyere ozi zuru oke maka ntụpọ ọdụ ụgbọ elu na nrụzi emere.
Moscow Ọdụ ụgbọ elu nke Sheremetyevo International Airport ewepụtala usoro ozi gbasara ala ọgbara ọhụrụ iji nyochaa ọnọdụ pavement ụgbọ elu ma nyere ọdụ ụgbọ elu aka ịrụzi ihe n'oge na ịhazi nhazi ogologo oge.
E mepụtara Sistemụ Njikwa Mmebi Mmekọahụ na -esochi nyocha nke ọma na nnwale nke usoro injinịa dị iche iche. Ọ na -eji ọdụ ụgbọ elu ọdụ ụgbọ elu nke Synchron ma bụrụkwa otu isi mmalite data na ọnọdụ arụ ọrụ nke pavement wuru maka ihe ikuku ọ bụla.
Usoro a gụnyere ozi zuru oke maka ntụpọ ọdụ ụgbọ elu na nrụzi emere, gụnyere ịhụ anya nke ihe ndị dị n'ọdụ ụgbọ elu akọwapụtara, yana nwee modulu na -ewepụta akụkọ.
Usoro na -enye ohere Sheremetyevo Ọdụ ndị injinia iji nyochaa ọnọdụ dị na paụnd wuru wee zaghachi ngwa ngwa maka ndapụ ọ bụla, site na njirimara nke na -anọchite anya ntụpọ na maapụ ọdụ ụgbọ elu izugbe. Usoro a na -edekọkwa ozi dị oke mkpa na ntụpọ kpọmkwem nke pavement, gụnyere ụdị na ụdị ntụpọ ahụ, ebe ntụpọ ahụ dị, ụbọchị na oge a chọpụtara ntụpọ ahụ, nha ntụpọ ahụ, yana ogo ihe egwu nke ntụpọ ahụ gosipụtara.
Usoro a bụ ngwa dị mma maka njikwa teknụzụ na ego yana nchekwa n'ihi na ọ na-enyere njikwa ọdụ ụgbọ elu aka na nhazi ego ogologo oge, na-atụpụta akụrụngwa achọrọ maka ndozi nke ụzọ wuru ewu na ijikwa usoro nrụzi n'okpuru akwụkwọ ikike.
Ọdụ ụgbọ elu Sheremetyevo so na ọdụ ụgbọ elu TOP-5 na Europe, ọdụ ụgbọ elu Russia kachasị na usoro njem na ibu. N’afọ 2020, ọdụ ụgbọ elu jere ndị njem nde 19 nde 784 ozi.